Doorasho Ka Dhacaysa Kenya Berri Iyo Dad Ka Qaxaya Nairobi................
Doorasho Ka Dhacaysa Kenya Berri Iyo Dad Ka Qaxaya Nairobi
Nairobi (Dhamays) – Dad badan oo Kenyan ah ayaa ka cabsi qaba in doorashooyinka guud ee dalkani ka dhacaya maalinta Berri ah in ay ka dhalan karaan rabshado u dhaxeeya qowmiyadaha wada dega Kenya ee kala taageersan xisbiyada loolamaya.
Sidaasi darteed dadka waxa ay sii iibsanayaan dhammaan noocyada kala duwan ee cuntooyinka sida saabuunta, caanaha baakadaha ku jira, galleyda, Daqiiqadda iyo salliidda si haddii ganacsiyada xidhmaan, rabshadna ay dhacdo in ay helaan kayd dhawr bilood ah oo ay ku noolaadaan.
“Maanta dadkii wax naga iibsanayay waxaa ka mid ahaa qof iibsaday 10 xabbo oo saabuun ah, taasina waa wax Qayrul-caadi ah” ayay tidhi Margaret Wanbui oo maamule ka ah Tukaan weyn oo ku yaalla xaafadda Kawangware oo ah meel dadku iska dageen oo ku taala duleedka waqooyi ee Nairobi.
Inkasta oo suuq fiican jiro, haddana gabadhani waxa ay sheegtey in maamulka dukaankani uu todobaadyo ka hor gaadhay go’aan ah in ayna la dagin wax badeeco ah oo cusub, cabsi laga qabo rabshado dhaca iyo khasaare dhasha awgeed.
Kadib doorashooyinkii lagu murmey sanadkii 2007-dii , waxaa la diley dad gaadhaya 12,000, waxaana guryahooda ka qaxay 500,000 kadib rabshado dhexmaray qowmiyadaha Kikuyu iyo Luo oo ah labada ugu tirada badan Kenya.
Balse, doorashadii 2013-kii dhacday oo uu ku guuleystey Uhuru Kenyatta waxa ay ahayd mid nabdoon oo aysan wax rabshado ah ka dhicin.
Hase yeeshee doorashada dhacaysa Salaasada waxaa aad looga cabsi qabaa in dhibaato dhacdo, waxayna cabsidan kor usii kacday kadib markii dil arxan-darro ah loo geystey madixii tijnoolajiyadda guddiga doorashada, Chris Msando.
Magaalada Nairobi iyo magaalooyin kale ee waaweyn ayay dad badan ka qaxayaan, iyaga oo dadka u qaxaya hadba meesha ay ku badan yihiin dadka ay isku beesha yihiin.
Waxaa ciwaan looga dhigey “The Silent Panic in Kenya” oo micnaheedu yahay “Hanfariirka shanqadha yar ee Kenya”.
Waxa ay qormada faahfaahin ka bixineysaa sida dadka ay u qorsheeyeen safarada ay ku tagayaan meelaha ay dadkooda ku badanyihiin si ay uga cararaan meelaha halista ugu jira rabshadaha.
Nin maamule ka ah dukaan weyn oo ku yaala xaafad dadka ladan ay deggen yihiin ee Nairobi, balse magaciisa diidey in uu sheego ayaa sheegey in ayna habooneyn in ay dadka baqdin gasho.
“Aniga waxaan u soo joogay afgambigii 1982-dii, dhibaato ayaanan kala kulanay, waxayna ila tahay in aan la qabsano xaaladda, nolosheenana halkeedii kasii wadano” ayuu u sheegey BBC-da.
Hadallo hanjabaad ah.
Balse nin lagu magacaabo Zuma oo ganacsi nijaarnimo ku haysta xaafaddaasi agteeda ayaa isagu qaba in aysan wax dhib ah dhici doonin doorashada kadib. Wuxuu intaasi ku daray in aanu soo iibsanin raashiin dheeraad ah oo kayd ah.
“Waan shaqaysan lahaa maalinta doorashada haddii dowladda ayna ku dhawaaqi lahayn in ay tahay maalin fasax, maalinta xigtana qorshahayga waa in aan sii wataa hawsheyda”.
Nin kale oo ay la hadashay BBC-da ayaa sheegey in uu kaliya awoodo in uu soo iibsado raashiin ku filan seddex maalmood. “Waan jeclaan lahaa in aan soo iibsado raashiin kayd ah oo badan, haddii aan haysan lahaa lacag” ayuu yidhi David Kadondi.
“Msando waxa uu fure u ahaa in doorashada ay noqoto mid xalaal ah, balse meesha ayay ka saareen, qaabka loo dileyna waxa ay muujineysaa in ujeeddadu ahayd in loo dhaco habka doorashada, kadibna lagu shubto” ayuu yidhi ninkan.
Booliiska Kenya ayaa wali baadhitaan ku haya dilka Msando oo lala diley haweeney da’ yar.
Doorashadan guud, ayaa waxa Shacabka Dalka Kenya ku soo dooran doonaan Madaxweynaha Dalkaasi Maamuli doona Afarta Sannadood ee soo socda, Xildhibaannada Baarlamaanka iyo Badhasaabbada Gobollada Dalkaasi. laakiin waxa laga cabsi qabaa in Rabshado ka dhacaan, sidoo kalena Weerarro Argagixiso ay ka geysato kooxda Al-shabaab.
Previous: TALYANLE: Xildhibaan Sheegtay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada
Next: “Diidmada TALYANLE Waxay Ka Timid Cirro..”Caddaani